Dowladda Soomaaliya oo UN-ka ka rabta inuu ka caawiyo dhanka warbaahinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Warfaafinta ee Xukuumadda Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Madaxa Xafiiska isku dabaridka gar gaarka beni’aadanimo ee OCHA ahna ku-xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Philip Lazarani, waxaana kulanka goob joog ay ka ahaayeen Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta iyo la taliyeyaasha Wasiirka.
Shirka ayaa waxaa looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay Wasaaradda iyo dadaalka ku aadan sidii ay Wasaaraddu dib u howlgelin lahayd Wakalaadda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA, Wargeyska Dalka, Madbacadda Qaranka, Dhismaha Golaha Murtida iyo Madadaalada iyo xarumo kale ee hoos yimaada Wasaaradda Warfaafinta.
Madaxa Xafiiska isku dabaridka gar gaarka beni’aadanimo ee OCHA Philip Lazarani ayaa sheegay in Wasiirka ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhexeysa labada dhinac, in la isaga kaashado doorka wacyigelineed ee ay Wasaaraddu waddo iyo arrimaha ku aadan dib u soo nooleynta hay’adaha hoos yimaada Wasaaradda Warfaafinta.
Wasiirka Warfaafinta ee Xukuumadda Soomaaliya, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo isna Warbaahinta Qaranka la hadlay ayaa sheegay in Philip Lazarani ay ka wada hadleen horumarka ay Wasaaraddu sameysay, wax qabadka joogta ah ee Wasaaaradda sameyso, habka ay Wasaaradda bulshada ugu tebiso hanaanka dowladnimo iyo sidii wada shaqeyn u dhex mari lahayd labada xafiis.
Philip Lazarani iyo xubnihii la socday ayaa soo kormeeray Keydka hadalka ee Radio Muqdisho, Qeybaha ay ku shaqeyaan SNTV iyo Radio Muqdisho, iyadoo warbixin laga siiyay hanaanka shaqo ee Waaxda Warbaahinta Qaranka.
Amisom oo ka warbixisay howlgallo ay ka sameysay Soomaaliya